Radio Production Training Basic
Radio Production Skills: Basic 1
रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सीप रेडियोमा काम गर्न चाहने नवप्रवेशीहरुका लागि तयार पारिएको अधारभुत तालिम कार्यक्रम हो । यहाँ उपलब्ध पाठहरु रेडियोमा काम गर्न चाहने वा कुनै तालिम वा सिकाइबीना रेडियोमा प्रवेश गरेकाहरुका लागि पनि उपयोगी छ । तथापी रेडियोमा बिशेषगरी सूचना तथा शिक्षामुलक कार्यक्रमका लागि आवाज संकलन गर्न वा रेडियो रिपोर्ट तयार पार्न चाहिने ज्ञान र सीप हासिल गर्न खोज्नेहरुका लागिमात्र यो तालिम सामग्री प्रभावकारी हुनसक्छ । यहाँ उपलब्ध पाठ (Lesson) हरुमा रेडियो के हो? रेडियोमा किन काम गर्ने? रेडियोमा कसले काम गर्ने? र रेडियोमा समुदाय केन्द्रित बिषयबस्तु तयार पार्दा के के कुरा जान्नुपर्छ जस्ता कुराहरु सिक्न सकिन्छ । यो पाठ अध्ययनको लागि अनुमानित समय ८ घण्टा तोकिएको छ । यहाँ उपलब्ध सामग्रीहरु पढेर, हेरेर वा सुनेर तपाईले रेडियोमा काम गर्नका लागि चाहिने आधारभुत ज्ञान पाउनुहुनेछ । साथै यहाँ सोधिने बस्तुगत प्रश्नहरुको उत्तर दिएर र बिषयगत प्रश्न अनुसारको प्रयोगात्मक परिक्षण पुरा गरेर तपाईले प्रमाणपत्र पनि पाउनुहुनेछ । यहाँ सिकाइने कुराहरु तलको Course Timeline मा सिलसिलेवार रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
01 प्रि टेस्ट : रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सीप ( Pre test radio production skills)
तपाईले पढ्न चाहानु भ...
02 पाठ एक: रेडियो र रेडियोकर्मी
रेडियो स्वर (SOUND) र दृष्य (PICTURE) को सुन्दर मिश्रण हो । रेडियोमा सुनिने स्वरले सुन्नेको दिमागमा दृष्य भरिदिन्छ । स्वर र दृष्यले सुन्ने श्रोताको मनमा रेडियोमा बोल्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व (PERSONALITY) बनाइदिन्छ । त्यसैले रेडियो स्वरऽ दृष्य र व्यक्तित्वको चित्रण हो ।
03 पाठ दुइ: रेडियोकर्मीका जिम्मेवारीहरु
समुदायका किसान दाजुभाई, शिक्षक, आमा, दिदीबैनी, भाउजु, बुहारी, हजुरबा, हजुरआमा र बोल्न जान्ने बालबालिका समेत रेडियोकर्मी हुनसक्छन् । रेडियोकर्मी हुनका लागि समसामयिक घटनाक्रमको विकास र बिस्तारप्रति उत्सुक हुनुपर्छ । देशदेशावरका घटनाहरुप्रति चासो राख्नुपर्छ । नयाँनयाँ प्रविधि र विषयमा जानकारी हुदाँ थप फाइदा पुग्छ । रेडियो कस्तो माध्यम हो र यसका सवल र दुर्वल पक्षको बारेमा थाहा भयो भने तपाइले प्रभावकारी कार्यक्रम तयार पार्न सक्नुहुन्छ ।
04 पाठ एक र दुइ परिक्षण ( Radio Production skills Chapter one)
तपाईले अहिलेसम्म रेड...
05 पाठ तीन: रेडियोमा काम शुरुगर्नु अगाडि जान्नैपर्ने कुराहरु
माथि नै भनिसकिएको छ की समुदायको जोकोही रेडियोकर्मी हुनसक्छ । रेडियोमा काम गर्नु भनेको रेडियो स्टेशनमा पुगेर स्टुडियोमा बसेर वा माइकमा बोल्नुमात्र हैन । तपाई समुदायमा नै बसेर पनि रेडियोमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसकारण रेडियो स्टेशनभन्दा टाढा रहेर समाचार पठाउने रिपोर्टर वा संवाददाता पनि रेडियोकर्मी हो ।
06 पोष्ट टेस्ट : रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सीप (post test radio production skills)
यो खण्डमा सोधिएको प्...
Author Binaya Shekhar